वीरगञ्ज नाका भएर नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै. सरकारले पर्यटकको मनोरन्जनका लागि आवस्यक वातावरण बनाउन जरुरी! - Birgunj Sanjalवीरगञ्ज नाका भएर नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै. सरकारले पर्यटकको मनोरन्जनका लागि आवस्यक वातावरण बनाउन जरुरी! - Birgunj Sanjalवीरगञ्ज नाका भएर नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै. सरकारले पर्यटकको मनोरन्जनका लागि आवस्यक वातावरण बनाउन जरुरी! - Birgunj Sanjal
वीरगञ्ज नाका भएर नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै. सरकारले पर्यटकको मनोरन्जनका लागि आवस्यक वातावरण बनाउन जरुरी!
वीरगञ्ज। सरकारले सुरु गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सुरुवातमा नै तराईको मुख्य नाका वीरगञ्जमा उत्साह देखिएको छ । भ्रमण बर्षको सुरुवातसंगै वीरगञ्ज नाका भएर नेपाल आउने पर्यटक र यातायातको संख्यामा क्रमश बृद्धी हुन थालेको छ ।
सरकारले २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको भ्रमण बर्ष २०२० को सुरुवातमा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका वीरगञ्जबाट नेपाल भित्रने पर्यटकको चाप देखिएको छ ।
नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या हेर्ने हो भने भारतीय पर्यटकको संख्या धेरै छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट डिसेम्बरको अन्तिम दिन र जनवरीको पहिलो दिन मात्र दुई पाङग्रे र सानो ४ पांग्रे सवारी साधन मात्र ३४ सय भित्रिएका छन् ।
यसै गरी, चार चक्के सवारी, कार, भ्यान लगायत करिब ९ सय ५० को संख्यामा नेपालमा प्रवेश गरेको गरेका छन् । यसैगरी वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट ४ जना बाहिरी पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
सो नाकाबाट अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, चाईना तथा अमेरिकाबाट एक–एक जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन् । दुई दिनमा मात्र करिब २० हजारको हाराहारीमा भारतीय पर्यटक वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
यता छिमेकी देशबाट आउने पर्यटकलाई लक्षीत गरी होटल ब्यवसायीले समेत काम सुरु गरेका छन् । प्रदेश समन्वय समितिसंगको सहकार्यमा होटल ब्यवसायी संघले ४० पर्यटकिय स्थलको छनौट गरी प्रचारको काम भईरहेको छ ।
नेपाल आउनेको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपाल आउने पर्यटक भारतिय धेरै छन् । तर सरकारले लागु गरेका बिभिन्न नियम र मुद्राको समस्याले भने पर्यटकलाई सास्ती छ । सरकारले यस्ता समस्या निराकरणमा पहल गरे भारतीय पर्यटकको संख्या अझै बड्ने पर्यटकहरुलेनै बताएका छन् ।
नेपाल र भारत सिमा र संस्कृती दुवैमा छिमेकी हुन् । बिगतका बर्षका तथ्याङ्कले समेत भारतीय पर्यटकनै नेपालमा धेरै आउने गरेको प्रमाणीत गरिकेको छ । बिभिन्न कारणले भ्रमण बर्षमा पनी भारतिय पर्यटकको योगदान धेरै हुने निश्चित छ । तसर्थ सरकारले पर्यटकको मनोरन्जनका लागि आवस्यक वातावरण बनाउन जरुरी छ ।रासस emountentv